indlu entle embindini - I-Airbnb
indlu entle embindini
UAnna ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uAnna iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ligumbi elihle nelipholileyo kumbindi wePoznan. Iflethi inefenitshala epheleleyo kwaye inayo yonke into efunekayo ukuze uhlale kamnandi: oomatshini bokuhlamba kunye nezitya, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, ibhedi enkulu ephindwe kabini kunye nesofa, i-wifi yasimahla.
Yindlu entle, epholileyo kwaye yanamhlanje kumbindi wePoznan. Iflethi inefenitshala epheleleyo kwaye inayo yonke into efunekayo ukuze uhlale ukhululekile: oomatshini bokuhlamba kunye nezitya, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, ibhedi enkulu ephindwe kabini kunye nesofa, iWiFi ye-intanethi yasimahla. Ilungele isibini!
Ilungile, ikufutshane nommandla wentengiso yesixeko esidala kunye nomgama wokuhamba ukusuka kumlambo iWarta (apho ungafumana indawo entle ngokwenene ebizwa ngokuba yiKontenerArt eneebha, ikonsathi ephilayo njl.njl.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Poznan